Maxkamad ku taala dalka Mouritania oo nin dhintay ku xukuntay 20 sano oo xarig ah | Maxkamad ku taala dalka Mouritania oo nin dhintay ku xukuntay 20 sano oo xarig ah | Hal Sheegaha La Hubo
Maxkamad ku taala dalka Mouritania oo nin dhintay ku xukuntay 20 sano oo xarig ah
Maxkamad ku taal magaalada Nouadhibou ee dalka Mouritania ayaa ku xukuntay labaatan sano oo xarig ah wiil iyo aabihii oo lagu helay dambi ah inay dad addoonsanayeen, balse wiilka aabihii ayaa geeriyooday intay ay socotay qaadista dacwada.
Hamoudi Ould Saleck ayaa joogay markii lagu dhowaaqayay xukunka, hase yeeshee aabihii Ould Saleck ayaa xabaal ku jirey markii lagu dhowaaqayay xukunka lagu ridey ee labaatanka sano ah.
Sidoo kale, Haweeney lagu magacaabo Tevea Mint Mohamed ayaa toban sano oo xarig ah lagu xukumay kadib markii lagu helay inay saddex ruux oo ay carruur ku jireen ay addoonsanaysay.
Wadanka Mauritania oo addoonsigu uu si weyn ugu baahsan yahay ayaa xukunkan waxa uu noqday kii ugu dheeraa ee abid wadankan ku yaal Galbeedka Afrika dad lagu xukumo.
Is addoonsiga ayaa laga mamnuucay wadanka Mauritania sanadkii 1981kii hase yeeshee waxaa la rumeysan yahay in boqolkiiba hal dadka ku nool wadankaas ay yihiin dad ku jira addoonsi.
Dadka madmadow ayaa u badan dadka la addoonsado iyadoo ay u shaqeeyaan dadka midabkoodu maariinka yahay ee dalka Mauritania. Sanadkii 2016 ayay xabsiga dhigtey dowlada Mouritania Biram Ould Dah Abeid oo u ololeeya joojinta addoonsiga.
Iyadoo dambi laga dhigey addoonisga sanadkii 2015 ayaa dadka lagu helo waxaa hore loogu xukumayay xabsi u dhexeeya labo sano illaa iyo shan sano. Ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo dhoweeyay xukunkan lagu ridey dadka lagu hela inay dad kale addoonsanayeen. Waxaa lagu qiyaasaa in dad gaaraya 43,000 oo ruux ay ku nool yihiin addoonimo dalka Mouritania.